Degso Internet Download Manager loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (10.10 MB)
Degso Internet Download Manager,
Waa maxay Maamulaha Soo Dejinta Internetku?
Maamulaha Soo Dejinta Internetka (IDM / IDMAN) waa barnaamij deg deg ah oo faylasha lagu soo dejisto oo ku milma Chrome, Opera iyo daalacayaasha kale. Maamulaha soo dejinta faylkaan, waxaad ku sameyn kartaa dhammaan hawlgallada soo dejinta oo ay ku jiraan ka soo degsashada filimada internetka, soo degsashada faylasha, soo dejinta muusikada, soo dejinta fiidiyowyada YouTube. Maareeyaha Soo-dejinta Internetka, soo dejiyaha faylka ugu fiican, wuxuu la yimaadaa nooc tijaabo ah oo 30-maalmood ah waxaadna isticmaali kartaa dhammaan astaamaha muddo cayiman; Markaas waxaad u baahan tahay inaad hesho lambarka taxanaha ah oo aad u cusbooneysiiso nooca buuxa.
Maareeyaha Soo-dejinta Internetku waa maamule soo-dejin fayl oo awood leh oo kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo faylasha internetka illaa 5 jeer si dhakhso leh. IDM, oo lagu dhex dari karo dhammaan daalacashada internetka ee caanka ah sida Firefox, Google Chrome, Opera iyo Internet Explorer, ayaa sidoo kale kuu oggolaaneysa inaad sii wadato soo degsashadaada aan dhammeystirnayn halkii aad ka tagtay. Waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka adigoo gujinaya batoonka soo dejinta ee Maareeyaha Soo-dejinta Internetka.
Maareeyaha Soo Dejinta Internetka Soo Degso, Download IDM
Haysashada interface isticmaale aad u nadiif ah oo habaysan, IDMAN ayaa ka dhigaysa dhammaan hawlgallada maaraynta faylalka mid aad u fudud isticmaalayaasha iyada oo ay ugu wacan tahay badhannadeeda waaweyn ee wanaagsan. Adoo ku soo dejinaya dhammaan soo dejimaha fayllada kala duwan iyadoo loo eegayo nooca ay yihiin, jahwareerka ka dhalan kara ayaa la iska ilaaliyaa waxaana amar buuxa la siiyaa faylasha la soo dejiyey Intaa waxaa sii dheer, mahadsanid menu-dejinta horumarsan ee barnaamijka, waxaad ku sameyn kartaa hagaajinta lagama maarmaanka u ah noocyada faylasha kala duwan iyo ilaha soo dejinta.
Maareeyaha Soo-dejinta Internetka, oo si otomaatig ah isu cusbooneysiin kara markii cusbooneysiin cusub la sii daayo, ayaa u oggolaanaysa dadka isticmaala inay si joogto ah u isticmaalaan nooca ugu dambeeya ee barnaamijka.
Intaa waxaa sii dheer, mahadsanid astaamaha sida taageerida-iyo-hoos u dhaca, jadwalka hawsha, ilaalinta fayraska, safka soo degsashada, taageerada HTTPS, xuduudaha xariiqda taliska, dhawaaqyada, horudhaca ZIP, wakiillada wakiillada iyo soo dejinta kootada horumarka ah ee IDM, isticmaaleyaashu waxay yeelan karaan dhammaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin maamulaha soo dejinta.Waxay yeelan karaan astaamo.
Maamulaha Soo Dejinta Internetka, oo aanan la kulmin wax dhibaato ah intii lagu jiray tijaabooyinkeyga, wuxuu isticmaalaa qadar aad u hooseeya oo ah ilaha nidaamka. Dabcan waa inaan dhahno waxay kuxirantahay cabirka feylka iyo xawaaraha soo dejinta.
Gebogebadii, haddii aad u baahan tahay barnaamij xirfadle ah oo leh astaamo horumarsan oo aad u isticmaali karto inaad kala soo baxdo faylashaada internetka, xaqiiqdii waa inaad isku daydaa Maareeyaha Soo-dejinta Internetka. Waxaad si fudud uga soo dejisan kartaa badhanka soo dejinta Maamulaha Internetka.
Sidee loo Isticmaalaa Maareeyaha Soo Dejinta Internetka?
Waxaa jira dhowr qaab oo lagu soo dejisan karo filimada, fiidiyowyada, muusikada, feylasha leh Maareeyaha Soo Dejinta Internetka (IDM):
IDM waxay dabagal ku sameysaa qasabadaha Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Opera iyo daalacayaasha kale ee internetka. Habkani waa kan ugu fudud. Haddii aad gujiso xiriirinta soo-dejinta ee Google Chrome ama biraawsar kale, Maareeyaha Soo-dejinta Internetka ayaa la wareegi doona soo degsigan oo dardargelin doona. Xaaladdan oo kale, uma baahnid inaad wax khaas ah samayso, waxaad ku dhex wareegeysaa internetka sida aad had iyo jeerba sameyso. IDM waxay kala wareegi doontaa Google Chrome hadii ay u dhigantaa nooca faylka / kordhinta. Liistada noocyada faylasha / kordhinta si aad ula soo degsato IDM ayaa wax looga beddeli karaa Ikhtiyaariyada - Guud. Haddii aad gujiso Download Later goorta uu furmo daaqadda feylka, URL-ka (cinwaanka webka) ayaa lagu darayaa liiska soo degsashada, soo dejintu ma bilaabi doonto. Haddii aad gujiso bilowga, IDM waxay bilaabi doontaa inay isla markiiba soo degsato faylka. IDM,wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku lifaaqdo soo degsashadaada qaybaha IDM. IDM waxay soo jeedinaysaa qaybta iyo galka soo dejinta ee ku saleysan nooca feylka. Waad tafatiri kartaa ama tirtiri kartaa qaybaha oo aad ku dari kartaa qaybo cusub daaqadda IDM ee weyn. Waad arki kartaa waxyaabaha ku jira faylka la cadaadiyey kahor intaadan soo dejin adoo gujinaya badhanka Falanqeynta. Haddii aad hoos u dhigto CTRL adoo gujinaya xiriiriyeha soo dejinta biraawsarka, IDM ayaa la wareegeysa wixii soo dejin ah, haddii aad hoos u dhigto ALT, IDM ma la wareegi doonto soo dejinta mana u oggolaaneyso barowsarku inuu soo dejiyo feylka. Haddii aadan doonaynin IDM inay kala soo baxdo wixii laga soo dajinayo biraawsarka, dami isdhexgalka biraawsarka xulashada IDM. Ha iloobin inaad dib u bilowdo biraawsarka kadib markaad damiso ama aad gasho isdhexgalka biraawsarka ee IDM Options - General.Haddii dhibaato kaa haysato inaad kala soo degto Maareeyaha Soo-dejinta Internetka, riix badhanka ALT.
IDM waxay la socotaa kilibbarka URL-yada saxda ah (cinwaanada shabakadda). IDM waxay la socotaa qaanadaha nidaamka ee URL-yada leh noocyada kordhinta khaaska ah. Markii cinwaan webka ah loo guuriyo sabuuradda, IDM ayaa soo bandhigeysa wada hadalka si loo bilaabo soo dejinta. Haddii aad gujiso OK, IDM ayaa bilaabi doonta soo dejinta.
IDM waxay ku dhexjirtaa liiska midig-gujinta ee IE-ku saleysan (MSN, AOL, Avant) iyo daalacashada Mozilla (Firefox, Netscape). Haddii aad midig u gujiso xiriiriyaha biraawsarka, waxaad arki doontaa Soo dejiso oo leh IDM. Waxaad kala soo bixi kartaa dhammaan xiriiriyeyaasha qoraalka la soo xulay ama xiriirin gaar ah bogga HTML. Qaabkan soo degsashada feylasha waa mid waxtar leh haddii IDM uusan si otomaatig ah ula wareegin soo dejinta. Kaliya dooro ikhtiyaarkan si aad u bilowdo soo degsashada xiriiriyaha leh IDM.
Waxaad gacanta ku dari kartaa URL (cinwaanka webka) badhanka Add URL. Waxaad ku dari kartaa feyl cusub oo aad ku soo dejiso adoo ku dar URL. Waxaad ku geli kartaa URL cusub sanduuqa qoraalka ama waxaad ka dooran kartaa mid ka mid ah kuwii hore. Waxaad sidoo kale qeexi kartaa macluumaadka gelitaanka adiga oo calaamadeeya sanduuqa Isticmaalka Oggolaanshaha haddii adeeguhu u baahan yahay oggolaansho.
Jiid oo hoos u dhig xiriiriyeyaasha biraawsarka illaa IDM daaqadda weyn ama soo dejiso gaariga. Bartilmaameedka dhibicdu waa daaqad laga helo hyperlinks laga soo jaray Internet Explorer, Opera ama daalacashada kale. Waad jiidi kartaa oo ka tagi kartaa xiriiriyaha shabakaddaada daaqaddan si aad ugu bilowdo soo dejintaada IDM.
Waxaad ka bilaabi kartaa soo dejinta qadka amarka adoo adeegsanaya xuduudaha xariiqda taliska. Waxaad ka bilaabi kartaa IDM xariiqda taliska adoo adeegsanaya cabirrada soo socda.
Internet Download Manager Noocyada
Cabirka Faylka: 10.10 MB
Horumar: Tonec, Inc.